Ongakubona e-Jaén: Ifa eliyisikhumbuzo nendawo engokwemvelo | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona eJaén
Luis Martinez | 10/01/2022 15:30 | Spain amadolobha, Iziqondiso
Uma uzibuza yini ongayibona eJaén Ngoba ufuna ukuvakashela idolobha lase-Andalusia, sizokutshela ukuthi linefa lesikhumbuzo elihlaba umxhwele. Lokhu kuye kwahambisana nawo wonke umlando wawo omude, ohlanganisa, okungenani, kusukela ezikhathini zase-Iberia, njengoba kufakazelwa indawo yokuvubukula ye Igquma lePlaza de Armas yasePuente Tablas.
Kamuva, iJaén yayizoba inhloko-dolobha Umbuso ongcwele kwaze kwaba sekhulwini le-XNUMX. Kodwa, ngaphezu kwalokho, idolobha lase-Andalusian lisendaweni enenhlanhla, phansi kwedolobha Santa Catalina hill futhi i entabeni yaseJabalcuz, lapho unemizila embalwa yokuhamba izintaba, futhi uzungezwe izihlahla zomnqumo. Uma ufuna ukuthola ukuthi yini ongayibona eJaén, sikukhuthaza ukuba uqhubeke ufunda.
1 ICathedral Yokwenyuka
2 Amanye amathempeli nezakhiwo zenkolo ongazibona eJaén
3 I-Arab Baths kanye Nesigodlo se-Count of Villardompardo
4 Ezinye izigodlo ongazibona eJaén
5 Santa Catalina Inqaba
7 I-Iberian Museum
8 Isibhedlela Esidala SaseSan Juan de Dios
9 Amapaki nezindawo ezizungezile e-Jaén
I-Cathedral of the Assumption eJaén
Liyithempeli elimangalisayo le Isitayela se-Renaissance, nakuba ingaphambili laso lingelinye lamatshe ayigugu e-Spanish Baroque. Yamemezela Isikhumbuzo Sezomlando Wamasiko, ukwakhiwa kwayo kwaqala ngekhulu le-XNUMX futhi kwathatha amakhulu eminyaka alandelayo. Ngaphezu kwalokho, ngemva kokuzamazama komhlaba Lisboa, kwadingeka abuyiselwe. Kodwa, uma ingaphandle layo lilihle, limangalisa nakakhulu lokho ongakubona ngaphakathi.
Isibonelo, ikhwaya ye-neoclassical, okungenye yezinkulu eSpain, kanye nendlu yesahluko, umsebenzi we U-Andrés de Vandelvira. Kodwa, ngaphezu kwakho konke, kufanele uvakashele ngaphakathi insalela yobuso obungcwele, ebhekwa njengobuso bangempela bukaJesu Kristu. Yindwangu uVeronica ayezomisa ngayo ubuso beNkosi ngesikhathi sePassion.
Amanye amathempeli nezakhiwo zenkolo ongazibona eJaén
I-Basilica yaseSan Ildefonso
Eduze kwesonto lombhishobhi, unezinye izakhiwo zenkolo eziningi ezinhle kakhulu edolobheni lase-Andalusia. Phakathi kwabo, i i-basilica yaseSan Ildefonso, yesitayela samaGothic futhi enesithombe seNcasakazi Yesonto, umsekeli kaJaén. Siphinde sikweluleke ukuthi uvakashele amabandla ka USanta mary magdalene, of ISan Juan Bautista, ezibhekwa njengezindala edolobheni, noma ISan Andrés, okuyizindlu I-Holy Chapel, igumbi lomkhuleko elinikezelwe ku-Immaculate Conception.
Ngakolunye uhlangothi, kukhona nezakhiwo zezindela ongazivakashela eJaén. Phakathi kwabo I-Royal Convent yaseSanto Domingo, ikomkhulu lamanje le-Provincial Historical Archive. I-façade yayo i-Mannerist ngesitayela futhi inesonto elakhiwa ngekhulu le-XNUMX. Kodwa isimangaliso esiyinhloko ongasibona kulesi sigodlo yi-cloister, ebhekwa njengenkulu kunazo zonke edolobheni futhi lapho amakholomu alo angamashumi ayisithupha eTuscan kanye namakhothamo angama-semicircular angamashumi amabili nesishiyagalombili agqama.
I-Arab Baths kanye Nesigodlo se-Count of Villardompardo
Amabhati ama-Arabhu aseJaén
Lesi sigodlo, esakhiwa ngekhulu le-XNUMX, siyisimangaliso Ukuvuselelwa kabusha, nakuba umnyango wayo oyinhloko wenziwa ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Ngaphakathi, kuvulandi omaphakathi onegalari ephindwe kabili yamakholomu futhi okuvuleleka kuwo amagumbi ahlukene esakhiwo.
Futhi, endaweni engaphansi kwesigodlo ungavakashela endala Amabhati ama-Arab, ebhekwa njengenkulu kunazo zonke ezilondolozwe eYurophu, namamitha-skwele angu-450. Ukuthandana kusukela ngekhulu le-XNUMX, banamagumbi amaningana ahlotshiswe ngokulandela i-canon yobuciko be-Almoravid ne-Almohad.
Iphinde ibe nesigodlo saseVillardompardo, iminyuziyamu emibili ongathanda ukuyibona. Ingabe I-Naive Art International, ngokusekelwe eqoqweni lomdwebi UManuel Moralfuthi i Wezobuciko Nemikhuba Edumile, enenani elibalulekile le-ethnographic.
Ezinye izigodlo ongazibona eJaén
IVillardopardo akusona ukuphela kwesakhiwo esiwubukhosi ongasibona eJaén. Eqinisweni, sincoma ukuthi ungaphuthelwa okuyigugu Palace of the Vilches, ne-façade yayo ehlaba umxhwele yeRenaissance; i eViscount de los Villares noma i-Count-Duke, eseduze nesigodlo sezindela sase-Santa Teresa de Jesús; i Isigodlo sesifundazwe, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi eneqoqo elibalulekile lemidwebo, noma Ihholo lasedolobheni, ephefumulelwe eyandulele, kodwa iyigugu le-eclectic le-architecture yekhulu lama-XNUMX.
Kodwa, mhlawumbe, isigodlo sokuqala nesihlaba umxhwele kunazo zonke eJaén ekaConstable Iranzo ngesitayela sayo esimangalisayo se-Mudejar. Isampula yokusinda kobuciko bamaSulumane ngemuva kokunqoba kobuKristu kwedolobha, uma ukwazi, vakashela ihholo layo elimangalisayo eline-aljarfe noma uphahla ngokhuni oluqoshiwe. Njengamanje, iyindlunkulu yoMtapo Wolwazi Kamasipala.
Santa Catalina Inqaba
Inqaba yaseSanta Catalina
Cishe iyitshe lesikhumbuzo elaziwa kakhulu e-Jaén. Itholakala egqumeni legama elifanayo futhi yakhiwa ezikhathini zasendulo phezu kwezinsalela zenqaba endala yama-Arab. Eqinisweni, inkimbinkimbi ine, eduze kwayo, ezinye izivalo ezimbili: i I-Alcazar endala futhi i Ngavula, nakuba ingxenye enhle yalezi zinsalela zasuswa ukuze kwakhiwe i-parador de turismo kazwelonke.
Ukugcinwa kwenqaba kungamamitha angamashumi amane ukuphakama futhi ngaphakathi kunesikhungo sokuhumusha. Kodwa, ngaphezu kwakho konke, ukusuka kuyo unemibono emangalisayo ye-Jaén nezihlahla zeminqumo nezintaba ezizungeze leli dolobha.
Ngokufanayo, eqenjini, i Isonto likaSaint Catherine wase-Alexandria, eyakhiwe phakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX ngesitayela samaGothic, futhi isiphambano, esendaweni ephakeme kakhulu yegquma futhi ewuphawu lomuzi. Kuyo ungakwazi futhi ukufunda i-sonnet enhle yembongi kaJaen U-Antonio Almendros Aguilar.
Idolobha lalinamaHeberu amakhulu eminyaka ayishumi nambili futhi isethi yemigwaqo emincane nemiqansa eyakha indawo yawo yamaJuda iyingxenye yenethiwekhi. Izindlela zaseSefaradi eduze kwamadolobhana anjengeCórdoba, Ávila, Béjar noma I-Calahorra. Kuyaziwa nangokuthi Indawo yaseSanta Cruz futhi, phakathi kwezakhiwo zayo ezivelele kukhona indlu ka-Ibn Shaprut, iCarnicerías, ngaphansi kwayo kukhona okugeza baseNaranjo, i-menorah e-Plaza de los Orfanos kanye nezinsalela zesango le-Baeza, enye yezindawo zokungena Odongeni.
Kodwa, mhlawumbe, isici esivelele kunazo zonke kule ndawo yi- I-Royal Monastery yaseSanta Clara, ikhulu le-XNUMX. Njengelukuluku lokufuna ukwazi, sizokutshela ukuthi abesifazane abazoshada banikela ngamaqanda kumasistela i-Poor Clare ukuze babe nesikhathi esimnandi ngosuku lwabo lomshado.
Izingcezu ze-Iberian Museum of Jaén
Kungokunye ukuvakasha okubalulekile eJaén, njengoba kuhlala njalo iqoqo elikhulu kunawo wonke lobuciko base-Iberia emhlabeni. Iqukethe izingcezu zezindawo zemivubukulo kuso sonke isifundazwe. Phakathi kwabo kugqame ukuthi Ibhuloho laseTablas, esesishilo kakade. Kodwa futhi baye banikela ngezinto eziningi labo of UCerrillo Blanco e-Porcuna, kusukela Castulo e Linares, kusukela I-Cerro del Pajarillo ku-Huelma noma leya INqabayokulinda eFort of the King.
Isibhedlela Esidala SaseSan Juan de Dios
I-Cloister yeSibhedlela saseSan Juan de Dios
Sizoqedela ukuvakasha kwethu kwedolobha kulesi sakhiwo esihle esakhiwa ngekhulu le-XNUMX bese siqhubeka sikuxoxela ngendawo ezungezile yaseJaén. Igqame kakhulu ngefaçade yayo ye-Gothic engasekho kanye negceke layo elihle lesitayela se-Andalusian Renaissance, elibukeka kahle futhi elinomthombo omaphakathi. Eduze kwesibhedlela, ungabona a isonto ibuyiselwe, kodwa igcina i-façade yayo yekhulu le-XNUMX.
Amapaki nezindawo ezizungezile e-Jaén
I-Alameda de los Capuchinos e-Jaén
Njengoba sishilo, idolobha lase-Andalusian linendawo enenhlanhla nendawo ezungezile enhle kakhulu lapho ungenza khona ithakazelisa izindlela zokuhamba nezintaba. Phakathi kwabo lowo odabulayo entabeni yaseJabalcuz, esesishilo kakade futhi ehamba phakathi kwezihlahla zikaphayini nezihlahla zomnqumo. Uma uhamba ngayo, uzobona nokwakhiwa kwe i-spa endala nezingadi zayo, iqoqo lezakhiwo ezinenani elikhulu lezakhiwo ezakhiwa ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX.
Indlela edlula edolobheni elidala iphinde inikeze nezindawo ezinhle Udonga idolobha lasendulo, eliholela endaweni yokuzijabulisa ye- Chimba Cross, lapho kukhona ikilasi lemvelo, kanye nalelo eliya kulo I-Pinares del Neveral, eduze nenqaba yaseSanta Catalina.
Nokho, akudingekile ukuba umshiye uJaén ukuze ujabulele imvelo. Idolobha linamapaki amaningana, amaningi awo, ngaphezu kwalokho, anobuhle obukhulu. Mhlawumbe enhle kakhulu iyona Alameda de Capuchinos, ehlehlela emuva ngekhulu le-XNUMX futhi inezingadi zesitayela seRenaissance kanye nomgwaqo omaphakathi oklanyelwe ukugibela ikalishi. Kusondele kakhulu kuye I-Convent of the Franciscan Conception noma i-de las Bernardas, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX.
I Concordia Park, etholakala eduze kwe- itshe lesikhumbuzo ezimpini, enikezelwe kwabase-Las Navas de Tolosa no-Bailén futhi yenziwa umqophi wezithombe waseJaén I-Hyacinth Higueras e 1910.
Kodwa mhlawumbe ipaki elihle kunazo zonke eJaén eka-Andrés de Valdenvira okuyinto, ngamamitha-skwele ayizinkulungwane eziyikhulu, inkulu kunawo wonke e-Andalusia. Inezinhlobo zezitshalo ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili, amachibi, imithombo, inkundla yemidlalo yeshashalazi kanye nenkundla yebhola. Iphaphu elikhulu ledolobha futhi liyindawo lapho ungenza khona imisebenzi yezemidlalo.
Sengiphetha, sixoxile nawe mayelana yini ongayibona eJaén. Njengoba usubonile, idolobha lase-Andalusian likunikeza izinto eziningi ezikhangayo. Inezikhumbuzo ezinhle kakhulu, imvelo enenhlanhla kanye nokugqwayiza okuningi. Mayelana nalokhu, ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukujabulela a i-gastronomy emangalisayo futhi eziningana izindawo ze-tapas, eyakudala ngesi-Jaén. Phakathi kwezitsha ezijwayelekile ongazinambitha edolobheni lase-Andalusia, kukhona izibiliboco ezifana nesaladi kapelepele ogazingiwe, i-pipirrana, isipinashi se-asparagus sesitayela sikaJaén, isitshulu sikabhontshisi ne-aubergine noma i-cod eno-anyanisi. Ngaphandle kokukhohlwa amaswidi afana nama-pestiños, ama-alfajores noma ama-ochíos. Awufuni ukujabulela leli dolobha elihle lase-Andalusian?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Yini ongayibona eJaén
Umlando wamanxiwa aseRoma ogwini lwaseBolonia
Lapho ongabhukuda khona namahlengethwa eSpain